Ụgbọ elu niile kagburu, ọdụ ụgbọ mmiri emechiri ka ihe nkwado Shanghai maka Typhoon Chanthu
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi China » Ụgbọ elu niile kagburu, ọdụ ụgbọ mmiri emechiri ka ihe nkwado Shanghai maka Typhoon Chanthu
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Rail njem • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
A ga -akagbu ụgbọ elu niile n'ọdụ ụgbọ elu Pudong nke Shanghai mgbe elekere 11 nke Mọnde n'ihi ihu igwe, ebe ụgbọ elu niile na -agafe n'ọdụ ụgbọ elu Hongqiao dị na ọdịda anyanwụ nke obodo ahụ ga -akwụsịkwa mgbe elekere atọ nke ehihie n'otu ụbọchị ahụ, dịka ọkwa sitere na Ọdụ ụgbọ elu Shanghai. Abalị Sọnde.
Akwụsịre ọrụ akpa n'ime ọdụ ụgbọ mmiri Shanghai.
Ụgbọ elu niile kagburu n'ọdụ ụgbọ elu Pudong International nke Shanghai.
Typhoon Chanthu na -atụ anya na ọ ga -akụ Shanghai na abalị Mọnde.
Na nkwupụta ewepụtara taa, Shanghai International Port Group kwupụtara na ọdụ ụgbọ mmiri nke Shanghai akwụsịla ọrụ metụtara akpa, n'ihi na a na-atụ anya na ajọ ifufe Chanthu ga-ada na mpaghara ndịda obodo ahụ n'abalị Mọnde.
Ningbo Meidong Container Terminal Co. na mpaghara Zhejiang dị nso kwụsịrị ụfọdụ ọrụ akpa site na Fraịde, ụlọ ọrụ ahụ kwuru na akaụntụ wechat ya ụnyaahụ.
Akwụsịla ọrụ na nnukwu ọwa mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri Zhoushan nke mpaghara - ụlọ nke ụfọdụ nnukwu tankị na ebe nchekwa mmanụ China - kemgbe ehihie Satọde.
Mgbachi ọdụ ụgbọ mmiri ahụ nwere ike belata mbupu ụgbọ mmiri ma mebie ụdọ ọkọnọ zuru ụwa ọnụ, nke na-agbasi mbọ ike ịnagide mbupụ ndekọ sitere na China na nsonaazụ ntiwapụ COVID-19 mpaghara.
Ọzọkwa, a ga -akagbu ụgbọ elu niile na Shanghai Ọdụ ụgbọ elu Pudong International mgbe elekere 11 nke Mọnde n'ihi ihu igwe, ebe ụgbọ elu niile na -agafe ọdụ ụgbọ elu Hongqiao dị na ọdịda anyanwụ nke obodo a ga -akwụsịkwa ka elekere 3 nke abalị n'otu ụbọchị ahụ, dịka ọkwa sitere na Ọdụ ụgbọ elu Shanghai n'abalị Sọnde.
Shanghai Gọọmentị kwupụtara na ọ ga -emechikwa ụlọ akwụkwọ ọta akara na ụlọ akwụkwọ praịmarị niile n'ehihie Mọnde na Tuzdee, ebe a kwụsịtụrụ ụfọdụ ụzọ ụgbọ oloko na ogige na ebe ndị njem nlegharị anya n'èzí na Mọnde na Tuesday.
Mpaghara Zhejiang kwalitere nzaghachi mberede ya na Chanthu na ọkwa kachasị elu na Sọnde, mechie ụlọ akwụkwọ yana kwụsị ọrụ ikuku na ụgbọ okporo ígwè n'ọtụtụ obodo, ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi Xinhua kwuru. Ndị ọchịchị akwụsịla ụfọdụ ọrụ ụgbọ oloko dị oke elu na Osimiri Yangtze Delta.